तपाईंको वरदानलाई प्रयोग गर्नुहोस् । – Shalom Nepal
शालोम नेपाल – परमेश्वोरले तपाइँलाई प्रदान गर्नुभएको वरदानसँग तपाइँ के गर्दै हुनुहुन्छ? के तपाईं त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउदै हुनुहुन्छ वा तपाईं डरमा रही पाएको वरदानलाई लुकाउँदै हुनुहुन्छ? जब हामी येशूसामु खडा हुन्छौं तब हामी सबैले आ-आफ्नो जीवनको लेखा दिनुपर्ने हुन्छ । त्यो समय यदि हामि ‘स्‍याबास असल नोकर, भन्ने शब्द परमेश्वोरको मुखबाट सुन्न चाहन्छौं भने आफ्नो वरदानलाई प्रयोग गर्नुहोस्।
वरदानको दृष्टान्त यति गहन छ कि यसले हामीलाई परमेश्वरले दिनुहुने क्षमताहरू प्रयोग गर्नुको महत्त्व देखाउँदछ। एक जना मालिकले दश जना नोकरलाई दस चाँदीका सिक्का दिएर गए। नोकरहरूले ती सिक्काहरू लिए र त्यो भन्दा बढी कमाई गर्न आशा गरे। पहिलो नोकरले दश सिक्का कमायो, दोस्रोले पाँच सिक्का कमायो, र अर्कोले उसको आफ्नो क्षमतामा केही गरेन। हामीलाई थाहा छैन किन उसले आफ्नो वरदान लुकाउने छनौट गर्‍यो। कारण जे भए पनि जब मालिकलाई खाता बुझाउने समय आयो उसले धेरै नै ध्रुत विचार ल्यायो, उसको मालिकले आफूमाथि राखेको विश्वास देखाउन केही पनि गर्न खोजेन ।
त्यसैले मैले यो किसिमको घटना चर्चहरूमा देखेको छु। परमेश्वोरले हरेक जनालाई एक किसिमको वरदान दिनुभएको छ। जुन वरदानलाई तिनीहरूलाई प्रयोग गर्दैनन्। तिनीहरू अल्छी नोकरहरू हुन् त्यहाँ बसेर केहि गर्दैनन्। हामीले बुझ्नु पर्ने यो छ कि, हामी इसाईलाई केवल वरदानहरू मात्र दिदैनन् तर हामीलाई एउटा भूमिका खेल्न पनि दिइन्छ। त्यसैले वफादार हुनुहोस् र लगनपूर्वक तपाईंको वरदानमा काम गर्नुहोस्।
तिनले आफ्‍ना दश जना नोकरहरूलाई बोलाएर तिनीहरूलाई दश सुनका सिक्‍का दिएर भने, ‘जबसम्‍म म फर्किआउँदिनँ यसबाट व्‍यापार गर।’ “तर तिनका प्रजाहरू तिनलाई घृणा गर्थे, र तिनीहरूले तिनको पछिपछि यसो भनेर दूतहरूलाई पठाए, ‘तिनले हामीमाथि राज गरेका हामी चाहँदैनौं।’ “तब राज्‍य अधिकार पाई तिनी फर्केपछि आफूले पैसा दिएका नोकरहरूलाई आफूकहाँ बोलाउने हुकुम दिए, अनि व्‍यापारबाट तिनीहरूले कति नाफा गरे भन्‍ने तिनले जान्‍न चाहे। “तब पहिलो आएर यसो भन्‍यो, ‘मालिक, तपाईंको सिक्‍काले अझै दश सिक्‍का कमाएको छु।’ “तिनले त्‍यसलाई भने, ‘स्‍याबास असल नोकर, तँ अति थोरैमा विश्‍वासी भइस्, तैंले दश सहरहरूमाथि अधिकार पाउनेछस्‌। …म तिमीहरूलाई भन्‍दछु, जससँग छ त्‍यसलाई अझ बढ़ी दिइनेछ, तर जससँग छैन त्‍यससँग भएको पनि त्‍यसबाट खोसिनेछ। लूका १९:१३-२६
शालोम नेपाल – संसारमा एउटा समस्या छ: मानिसहरूले परमेश्वोरलाई चिन्दैनन्। धेरैले सोच्दछन् र भन्दछन कि म परमेश्वरलाई चिन्दछु र जान्दछु, त्यसो भनेर उनीहरू धोकामा परेका छन्। यो प्राथमिक समस्या प्रत्येक अन्य समस्या को कारण हो। सबै पाप परमेश्वरलाई नचिन्नेहरूको परिणाम हो। यदि मानिसहरूले परमेश्वरलाई चिनेका भए, तिनीहरूले उहाँलाई प्रेम गर्थे, उहाँलाई आदर गर्थे, उहाँजस्तो हुन […]
Posted on June 14, 2020 June 14, 2020 Author Shalom Nepal
शालोम नेपाल – मैले धेरै जसो नयाँ विश्वासीहरू आएर सल्लाह माग्दा उनीहरू आफ्नो परिवार, वा पुरानो साथीहरू वा सहकर्मीहरूसँग जस्तो व्यवहारमा उन्मुख हुँदैनन्। जब तपाईं संसारको निम्ति वास्तविक क्रूसमा टाँसिनुभयो अथवा क्रूसलाई पछ्याउनुभयो, तपाईंसँग स्वर्गीय जीवनको सम्मान र आराम हुनेछ। तपाईका विचारहरू दिनहुँ स्वर्गको रमणीय स्थानमा डुबेका हुनेछन्, जबकि अन्य सहकर्मीहरू यस संसारको नराम्रा कुलतमा […]